बाहिरी चक्रपथको जग्गाभित्र हाउजिङ- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
उनले शौचालयका मंगाल र फोहोर पानी बग्ने ढलका रूपमा परिणत भएकाले स्थानीयले छोप्नुपरेको बताए । ‘पहिला खोला थियो, अहिले नाला भइसक्यो । वर्षामा मात्र पानी बग्छ, अस्तव्यस्त भइसकेको छ त्यस क्षेत्रमा संरचना निर्माणले,’ वडाध्यक्ष ढकालले भने । सडक र वरपरका पसलेले सामान राख्ने गरेका छन् भने खोलामाथिको ढलान आँगनझैं भएकोछ केहीका लागि ।
सुकुम्बासी बस्तीमा खोला छोपेर पक्की ३ तलासम्मका घर निर्माण भइसकेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं. ३, १६ र २६ हुँदै यो खोलावाग्मतीमा मिसिन्छ । अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले भने आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने जनाएको छ । वाग्मतीका मुख्य ७ सहायक खोलाबाहेक उक्त समितिमार्फत कुनै योजना सञ्चालनमा नरहेको समितिका आयोजना उपप्रमुख योगेन्द्र चित्रकारले जानकारी दिए ।
चाँडै टेन्डर खोल्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘महानगरभित्र पर्ने सामाखुसी खोला क्षेत्रमा मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचना भत्काउन र करिडोर खोल्न त्यो रकम खर्च गर्नेछौं ।’ टोखा–५ का वडाध्यक्ष ढकालले महानगरले त्यो कार्यको सुरुआत गरे आफूहरूलाई पनि हौसला मिल्ने र कार्य अघि बढ्नेसम्भावना भएको बताए ।
उनीहरूले वडा नं. ३ मा उजुरी दिएका हुन् । वैशाख अन्त्यमा अवैध रूपमा खोला छोपी निर्माण गरेको संरचना भत्काई खोला खुलाइपाऊँ भन्दै झन्डै ५० जनाले निवेदन दिएका थिए । सोही वडाको कित्ता नं. ३६३, ३६५, ४८०, १५८, १५३, १५२, ३१९ र १३८ ले खोला मिचेर संरचना बनाउँदा आफूहरू बस्ने क्षेत्रमा भेल पस्ने गरेकाले खोला खुलाउन अनुरोध गर्दै स्थानीयले वडामा निवेदन दिएका छन् । खोला सफा गराउनुपर्ने र खोलाको दुई किनार छुटाइदिनुपर्नेउनीहरूको माग छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३ का अध्यक्ष दीपक केसीले व्यक्तिगत रिसइबीका कारण आफ्नै जग्गामा पर्खाल लगाउन नदिएको सदरे आलमले आरोप लगाएका छन् । आफूले घर बनाउँदा पनि वडाबाट गर्नुपर्ने कागजी कारबाहीमा सहयोग नगर्दा पाटनउच्च अदालतबाट निर्णय गराउनुपरेको उनले सुनाए ।
तर वडाध्यक्षले भने ढलान गरिएकोठाउँबाट ४ मिटर छोड्नु भनिरहेका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सामाखुसी खोलामा ४ मिटर छोड्नुपर्ने हुन्छ । तर खोलै देखिन्नभने कहाँबाट नाप्ने?’ उनले प्रश्न गरे । अर्कोतर्फ वडाध्यक्षले उनले सामाखुसी खोलाकोसिमाना मिचेकाले निर्माण रोकिएको बताए ।
वडाध्यक्ष केसीले भने, ‘राज्यको नीतिनियमभित्र बसेर निर्माण गर्नु भनेका हौं । करिडोर खोल्ने भएकाले त्यसैअनुरूप छाडेर निर्माण गर्नुपर्छ ।’ उनले राज्यको नीतिनियम मान्नुभन्दा व्यक्तिगत रिसइबीको आरोप लगाएको बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७६ ०९:१२